Laptọọpụ Razer kacha mma nke 2022: Nlebanya, Nduzi na ndị ọzọ!
La mbinye aka Raza Ọ lekwasịrị anya nke ukwuu na mpaghara egwuregwu na modding, ma ugbu a ọ chọkwara iweta ahụmịhe ya na kọmpụta nke ya. Ụfọdụ kọmputa nwere ngwaike dị ike nke ukwuu, yana atụmatụ mara mma maka ndị na-achọ iji ha egwuregwu vidiyo, ma ọ bụ ntụrụndụ n'ozuzu ha. Dịka ọmụmaatụ, maka ọtụtụ mgbasa ozi ị ga-ahụkwa ihe ngosi dị egwu na sistemụ ọdịyo dị egwu.
Iji nyere gị aka ịhọrọ, anyị emeela ntuziaka ịzụrụ lekwasịrị anya na Laptọọpụ Razer Mana tupu anyị ebido, ebe a bụ nhọrọ nke onyinye kacha mma ị ga-ahụ TAA:
Razer Blade 15 dị elu ...
Razer Blade 17 dị elu ...
1 Akwụkwọ ndetu Razer
1.2 Akwụkwọ Razer
2 Kedu ihe kpatara laptọọpụ Razer maka egwuregwu?
3 Kedu ihuenyo ị ga-ahọrọ na laptọọpụ Razer?
4 Razer ọ bụ ezigbo akara laptop?
5 Ebe ị ga-azụta laptọọpụ Razer
Akwụkwọ ndetu Razer
Razer, dị ka ndị na-emepụta laptọọpụ ndị ọzọ, emepụtala ọtụtụ usoro ma ọ bụ oke iji gboo mkpa dị iche iche ma mee ka ndị ọrụ niile nwee obi ụtọ. Ọ dị mkpa ịmara onye e bu n'obi kee onye nke ọ bụla iji mara nke ị ga-ahọrọ:
Usoro nke ụdị nwere nha ihuenyo atọ ịhọrọ site na (14 ", 15" na 17"), yana arụmọrụ kachasị mma ị nwere ike ịhụ na mpaghara akwụkwọ ndetu. Ndị otu a na-achịkọta ngwaike ọgbara ọhụrụ, na-enweta arụmọrụ maka egwuregwu nkụchi obi.
Akwụkwọ Razer 13 - Kọmputa ...
Ha bụ ngwakọta zuru oke n'etiti arụmọrụ na nrụpụta. Ụfọdụ akụrụngwa emebere maka ndị na-achọ ndị ọrụ chọrọ kọmpụta ọrụ na-enye ha ohere ịrụ ọrụ niile n'ụzọ dị ngwa na ngwa ngwa.
Ọ bụ usoro ultrabooks megoro ngwaike iji nye arụmọrụ enweghị atụ. Akara ahụ nwere mpako inwe ultrabook egwuregwu mbụ n'ụwa. Site na ihe ọma niile gbasara ịdị nro, ịdị mfe na nnwere onwe nke ultrabook, mana yana uru nke laptọọpụ egwuregwu.
Kedu ihe kpatara laptọọpụ Razer maka egwuregwu?
Razer bụ ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ nke dabeere na Singapore na San Francisco (CA). Ebe ọ bụ na e tọrọ ntọala na 2005, ọ lekwasịrị anya na ngwaike egwuregwu (keyboards, ụmụ oke, ...), na mgbakwunye na nke nta nke nta na-agbasawanye na ngwaahịa ndị ọzọ, ma mgbe niile na-eburu arụmọrụ, imewe na egwuregwu vidiyo n'uche. N'ihi nke a, laptọọpụ ha dịkwa mma maka ndị egwuregwu n'ihi:
EsereseTinye kaadị eserese NVIDIA GeForce RTX kacha ọhụrụ, na-enye arụmọrụ eserese kacha mma na ahịa akwụkwọ ndetu. Nkwenye maka egwuregwu vidiyo gị ịgagharị ngwa ngwa ọbụlagodi na mkpebi dị elu.
Ihuenyo ruru 360hz: ogwe ya dịkwa mma nke ukwuu, yana ọnụego ume ọhụrụ dị elu. Modelsfọdụ ụdị nwere ike ịgbago ruo 360 Hz, ya bụ, onyonyo a ga-emelite ugboro 360 kwa sekọnd. Nke a ga-eme ka ị hụkwuo eserese mmiri, na-enweghị jumps. Yabụ ị nwere ike afanye ike GPU gị yana FPS ọ na-ewepụta ruo oke.
Nhazi: Razer na-eji ọgbọ ọhụrụ nke Intel chips kwadebe laptọọpụ ya, na-arụ ọrụ dị ukwuu maka ọrụ na egwuregwu. Ị nwere ike ịchọta Intel Core i7 CPUs yana i9 n'ọnọdụ ụfọdụ maka ịrụ ọrụ dị elu.
Ihe ruru 32 GB Ram- N'adịghị ka ụdị ndị ọzọ na-ere modul ebe nchekwa, ma ọ bụ na-ekwe ka mgbasawanye ebe nchekwa nwere oke, Razer na-enye gị ohere ịhọrọ ihe ruru 32GB nke ikike ebe nchekwa dị ka ọkọlọtọ. Ọnụ ọgụgụ karịrị ezuru maka ọtụtụ egwuregwu vidiyo na ahịa, ọbụlagodi AAA kachasị ọhụrụ.
Igwe ọkụ RGB: Ihe ọzọ ndị egwuregwu na-amasịkarị bụ ịkwado ngwaọrụ ha na ọkụ LED nwere agba, na-emepụta mmetụta ọkụ. Razer maara nke a nke ọma site na ọtụtụ njikwa ọ na-arụpụta, ma chọkwara ibupụ ya na laptọọpụ, nke ga-egosipụta ahụigodo RGB-lit. Ị nwere ike ijikwa ọkụ ọkụ kwuru ka ọ masịrị gị, ma ọ bụ gbanyụọ ya ma ọ bụrụ na-ịchọrọ.
Kedu ihuenyo ị ga-ahọrọ na laptọọpụ Razer?
N'ime oke Razer ị ga-ahụ mkpebi ihuenyo dị iche iche. Nke ọ bụla nwere uru na ọghọm ya. Ebe ị nwere ike ịghọta nke a nke ọma ka ịhọrọ nke dabara gị mma:
FullHD- Ihe ngosi 144 na 360 Hz ndị a bụ asọmpi kachasị maka ndị egwuregwu. Ha ga-ekwe ka ị nweta uru ekele maka ọnụ ọgụgụ dị elu nke ume ọhụrụ, na-enye mmiri ozuzo na egwuregwu ahụ na nghọta dị ukwuu.
qHD: Ọ bụrụ na ị na-achọ nnukwu nghọta na nkenke, ị nwere ike nweta ngwaọrụ nwere ihuenyo QHD nwere ọnụego ume ọhụrụ 165 na 240 Hz. Nzaghachi na ọkwa zuru oke nke teknụzụ NVIDIA G-Sync kwalitere maka GPU na ngosipụta mmekọrịta FPS. Site na ha, ị ga-ewepụ mmetụta na-adọka ma nwee ahụmahụ na-emetụ n'ahụ na-enweghị nkwụsị.
4K: ma ọ bụrụ na ịchọrọ mkpebi kachasị elu na ịdị mma, mgbe ahụ ị ga-ahọrọ mkpebi a ọzọ. Otu ogwe teknụzụ OLED iji nweta oke nkenke na ụda ọ bụla, yana ojii ojii n'ezie, ịdị nkọ dị ukwuu ọbụlagodi na ị na-elele ya anya. Nhọrọ dị mma maka ndị okike na ndị na-emepụta ihe.
Razer ọ bụ ezigbo akara laptop?
Gear Razer dị oke ọnụ, mana ọ bara uru ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe kacha mma maka egwuregwu. Kọmputa ndị a nwere oke mma ma nwee ike bụrụ ọmarịcha ụzọ ọzọ na ASUS ROG, Alienware, Lenovo Legion, Acer Predator, ma ọ bụ HP OMEN.
Ke adianade do, ha nwere ngwaike nke ụdị isidị ka Intel, NVIDIA, wdg. Na nke anyị kwesịrị ịgbakwunye na ha ejirila usoro jụrụ oyi na-eme ka ọ bụrụ nke kachasị ike nke mere na ike dị ukwuu abụghị nsogbu, na ụlọ ikuku uzuoku, ma ọ bụ usoro mgbasa ozi dị elu. Na atụmatụ ndị ahụ, dị ka ị hụla na mbụ, dị ịtụnanya n'ezie, karịsịa n'akụkụ ihe oyiyi na ụda, na imikpu kachasị mma iji nwee mmasị na vidiyo na egwuregwu.
Ebe ị ga-azụta laptọọpụ Razer
Ọ bụrụ na-amasị gị ika Razer ma chọọ zụta otu n'ime laptọọpụ ha na ọnụ ahịa dị mma, ị nwere ike ilele ụdị na ụlọ ahịa dịka:
Amazon: ikpo okwu nkesa n'ịntanetị nwere ọtụtụ ụlọ ahịa na-ere ụdị laptọọpụ a site na webụsaịtị ha. Ọ bụ ya mere ị ga-eji hụ ọtụtụ onyinye na nsonye na ụdị niile ị nwere ike iche n'echiche. Ihe kacha enye onyinye na ngwaahịa na netwọkụ, yana nkwa na nchekwa nke Amazon na-enye mgbe ịzụrụ. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa Prime, ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ uru, dị ka oge mbupu na nnyefe efu kpamkpam karịa ndị ọrụ ndị ọzọ.
Ihe PC: Ụlọ ọrụ nkesa Murcian aghọwokwa ewu ewu na ngalaba IT n'ihi ọnụ ahịa ya. Dị ka Amazon, ha anaghị ere ozugbo, mana raara onwe ha nye ikesa ihe sitere na ndị ọzọ. Ọ bụ ya mere ị ga-eji hụ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụdị na nnukwu ngwaahịa ịhọrọ. Mbupu na-abụkarị ngwa ngwa na usoro ọrụ ha na-adịkarị mma. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ịnọ na mpaghara ahụ, ị ​​nwekwara ike họrọ ịnakọta ngwaahịa gị ozugbo na etiti ...
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Ụdị » Laptọọpụ Razer